Abakhiqizi Nabahlinzeki Bempahla Yaphansi - I-China Floor Grinders Factory
I-X3-A I-Industrial Dust Collectors
I-CC Floor polisher
I-F0 floor grinder iyisisetshenziswa esikhethekile sokugaya phansi sokwakhiwa kwendawo encane. Imishini ilula futhi inomshini wokugaya waphansi ophathwayo, uhlakaniphe ekwakhiweni kwawo futhi kulula ukuwusebenzisa. Umshini ungahlukaniswa ngokushesha, ngakho-ke kulula kakhulu ukuphatha nokuthutha.
I-F2 floor grinder iyisisetshenziswa esikhethekile sokugaya phansi sokwakhiwa kwendawo encane. Imishini ilula futhi inomshini wokugaya waphansi ophathwayo, uhlakaniphe ekwakhiweni kwawo futhi kulula ukuwusebenzisa. Umshini ungahlukaniswa ngokushesha, ngakho-ke kulula kakhulu ukuphatha nokuthutha.
I-F1-R i-floor grinder iyisisetshenziswa esikhethekile sokugaya emhlabathini wokwakhiwa kwendawo encane. Imishini ilula, ihlakaniphe ekwakhiweni kwayo futhi kulula ukuyisebenzisa. Umshini ungahlukaniswa ngokushesha, ngakho-ke kulula kakhulu ukuphatha nokuthutha.
F2-R izigayi zaphansi
I-F2-R i-floor grinder iyisisetshenziswa esikhethekile sokugaya emhlabathini wokwakhiwa kwendawo encane. Imishini ilula, ihlakaniphe ekwakhiweni kwayo futhi kulula ukuyisebenzisa. Umshini ungahlukaniswa ngokushesha, ngakho-ke kulula kakhulu ukuphatha nokuthutha.
F6 ama-grinders aphansi
I-F6 floor grinder iyimishini yokugaya esezingeni eliphezulu eyenzelwe ukwakhiwa kwendawo ye-lage.
Ifakwe injini yamandla aphezulu kanye nedivayisi yokulawula isivinini esishintshashintshayo ukuze ihlangabezane nezidingo zendawo enkulu yokwakhiwa kokugaya phansi.
I-F8 floor grinder iyimishini yokugaya esezingeni eliphezulu eyenzelwe ukwakhiwa kwendawo ye-lage.
Uchungechunge lwe-Flames F6-R lwama-grinders aphansi ngaphansi komkhiqizo we-Ares.
I-F6-R i-floor grinder iyisisetshenziswa sokugaya esisezingeni eliphezulu esiklanyelwe ukwakhiwa kwendawo enkulukazi kusukela ekukhumulweni kwaphansi kuya ekugayeni ukhonkolo namatshe emvelo.
F7-R izigayi zaphansi
Uchungechunge lwe-Flames F7-R lwama-grinders aphansi ngaphansi komkhiqizo we-Ares.
I-F7-R floor grinder iyisisetshenziswa sokugaya esisezingeni eliphezulu esiklanyelwe ukwakhiwa kwendawo enkulukazi kusukela ekukhumulweni kwaphansi kuya ekugayeni ukhonkolo namatshe emvelo.
F8-R izigayi zaphansi
Uchungechunge lwe-Flames F8-R lwama-grinders aphansi ngaphansi komkhiqizo we-Ares.
I-F8-R floor grinder iyisisetshenziswa sokugaya esisezingeni eliphezulu esiklanyelwe ukwakhiwa kwendawo enkulukazi kusukela ekukhumulweni kwaphansi kuya ekugayeni ukhonkolo namatshe emvelo.
I-Gear Driven Floor Grinder, Umshini Wokugaya Izihlahla, Isikhiqizi Sezihlalo Zemoto, Umshini Wokugaya Oyisicaba, Umshini Wokugaya Ngesivinini Esikhulu, I-Car Shampoo Vacuum,